Sida loo aado Kuuriyada Waqooyi | Wararka Safarka
Sida loogu safro Kuuriyada Waqooyi
Mariela Carril | 02/09/2021 17:00 | La cusbooneysiiyay 02/09/2021 20:24 | Talooyin, Waqooyiga Kuuriya
Waxaa dunida ku haray dalal shuuci ah midkoodna waa Waqooyiga Kuuriya. Su'aashu waxay tahay, miyaan tegi karaa goobaha dalxiiska? Ma aha dal u furan dalxiiska ballaaran laakiin xitaa sidaas, waa la booqan karaa.
Ma xiisaynaysaa in aad daaqadan u furto wixii hore? Mise waa adduun is barbar socda? Runtu waxay tahay in ay shaki la’aan noqon karto waayo -aragnimo lama ilaawaan ah. Aan aragno markaa sidaad u samayn karto socdaalka Kuuriyada Waqooyi, hannaankee la raacayaa iyo waxa halkaa lagu qaban karo.
1 Waqooyiga Kuuriya
2 U socdaalka Kuuriyada Waqooyi
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya ayaa ku jirta bariga asia waana qaybta waqooyi ee gacanka Kuuriya. Hayso xuduudda Shiinaha iyo Ruushka iyo dabcan leh Kuuriyada Koonfureed, Soonaha Militari loo maro.
Gacanka Kuuriya wuxuu gacanta ugu jiray Jabaankii 1910kii ilaa dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka (Sidaa darteed, Kuuriyaanka aad uma jecla Jabaaniiska), laakiin iskahorimaadka ka dib waxay u qaybsameen laba aag.
Dhinac waxaa taagnaa xoogaggii Midowgii Soofiyeeti iyo kuwii kale ee Mareykanka. Dhammaan wada xaajoodyadii lagu doonayay in dalka la mideeyo ayaa fashilmay sidaasna, iyo1948kii, laba dawladood ayaa dhashay, Jamhuuriyadda Koowaad ee Kuuriya (koonfurta), iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriya, oo ku taal waqooyiga.
Kuuriyada Waqooyi waa dawlad hantiwadaag ah, oo leh cibaado shakhsiyadda hoggaamiyaha oo caado u ah waqtiyo kale. Waa xubinta saddexaad ee labka ah ee qoyska Kim ee talada haya. Waa waddan ku nool taariikhdii hantiwadaagga: shirkadaha dawladda, beero wadareedyo iyo ciidan lacag badan qaata.
Marka laga hadlayo dhaqanka, in kasta oo ay jirto saamayn cad oo Shiine ah, runtu waxay tahay in dhaqanka Kuuriya guud ahaan (laga soo bilaabo koonfurta iyo waqooyiga) uu helay qaab u gaar ah oo aan xitaa rabshaddii dhaqan ee ay sameeyeen Jabaaniyiintu intii ay qabsadeen ay tirtiri karto. Hadda, sannadihii xorriyadda ka dib, Kuuriyada Koonfureed waxay bilaabeen inay xidhiidh weyn la yeeshaan adduunka halka Kuuriyada Waqooyi ay bilaabeen inay is xidhaan.
Markaa, haddii Kuuriyada Koonfureed ay noo tahay ummad casri ah, Kuuriyada Waqooyi waxay ku soo noqotay dhaqan soo jireen ah, oo leh qaabab dad badan waxay heleen xoog cusub.
U socdaalka Kuuriyada Waqooyi
Waxaan ku raacsanahay in aysan ahayn waxa ugu badan adduunka in loo safro dalxiis ahaan Kuuriyada Waqooyi. IYO dadka qaarkood si toos ah uma awoodaan samee, tusaale ahaan, Ameerikaanka, Kuuriyada Koonfureed ama kuwa Malaysia. Intayada kale waan tegi karnaa, laakiin waxaan raacnaa tallaabooyin taxane ah.
Marka hore keligaa ma aadi kartid woqooyiga korea. Kaliya iyada oo loo marayo hawlwadeen dalxiis yaa ku qasban inuu kuu sameeyo boos celin adiga oo xitaa ka baaraandega fiisada, saxiixo heshiis, ku siiya nuqulka heshiiskaas baasaboorkaaga.
Kahor intaanay jirin xannibaadyo aad u adag laakiin in muddo ah inay qayb ka noqdaan way caajis yihiin waxayna kaliya kaa codsanayaan inaad sheegto magaca shirkadda aad u shaqayso iyo xirfadda. Laakiin ka digtoonow, haddii si kadis ah aad uga shaqayso warbaahin ama urur siyaasadeed oo xuquuqda aadanaha ah, waxaa suurtogal ah inaysan ku siin fiiso.
Siempre wuxuu soo maraa Shiinaha marka hore iyo fiisaha Kuuriyada Waqooyi waa la heli karaa inta uu jiro. Taas waxaa sharxi doonta wakaaladda. Waxa wanaagsan, waa inay jirtaa wax wanaagsan, waa in nidaamka aan lagu samayn safaaradda.
Waxaa laga yaabaa in baasaboorkaaga lagu shaabadeeyo kastamyada maadaama aysan yeeli karin. IYO fiisaha kuma socdo baasaaboorka ee waa gooni. Waana inaad keentaa markaad dalka ka tageyso. Miyaad rabtaa inaad u dhigto xusuus ahaan? Way ku habboon tahay in la koobiyo, waxaa ka sii daran had iyo goor in la waydiiyo hagaha dalxiiska haddii aad samayn karto iyo haddii kale. Waxaa lagugula talinayaa inaadan is khilaafin.
Marka laga hadlayo ikhtiyaarada ay jiraan marka la eego socdaallada, waa wax weyn in la ogaado inaad awoodi doonto inaad aragto wax ka badan magaalada caasimadda ah, Pyongyang. Waxaad aadi kartaa Rason, oo ah aag dhaqaale oo khaas ah, waxaad ku dhex ciyaari kartaa Masik, waxaad fuuli kartaa buurta ugu sarreysa ee ah Paektu Mountain ama ka qeyb geli kartaa dhacdo dhaqameed.
Haa waad sawiri kartaa. Waxaa la sheegay inaysan ku oggolaan doonin, laakiin run ma aha ama ugu yaraan gebi ahaanba ma aha. Ahaanshaha qof caqli badan, weydiinta hagahaaga iyo adiga oo aan samayn bandhig sawir qaadis waa suurtogal. Oo sida cad, wax walba waxay ku xiran yihiin meesha aad joogto iyo qofka ama waxaad rabto inaad sawir ka qaadato.
Dalxiisayaasha looma oggola inay qaataan buugaagta ama CD -yada ama wax la mid ah, ma noqon doonto wax saameeya dhaqanka quduuska ah ee Kuuriyada Waqooyi. Isla sidaas oo kale ayay u shaqaysaa, iyada oo aan la qaadan "xusuus -qoryo." Dib u soo kabashada, Meelahee ayaan booqan karaa Kuuriyada Waqooyi?
Pyongyang waa albaabkii hore. Waxaad dhex mari doontaa fagaarayaal iyo fagaarayaal leh taalooyin badan. Socdaalku waa mid aad u siyaasadaysan magaaladan sababtoo ah kama tagaysid dalka adigoon lahayn muuqaal wanaagsan oo hogaamiyaha. Kadib, waxaad arki doontaa faylka Kumsusan Palace of the Sun, Taallada Xisbiga Aasaasay, Fagaaraha Kim II-sung, Arc de Triomphe, iyo Mausoleum of Kim II-sung iyo Kim Jong-il ama Taallada Mansu Hill.
Baska ka sokow waxaad ku safri kartaa tareenka dhulka hoostiisa mara, wax suurtogal u ah ajaanibta kaliya tan iyo 2015, ama baaskiilka ama wax iibsiga. Taasi waa mid aad u xiiso badan oo aan shaki lahayn, lama ilaawaan. Ka dib, meel kale waa Rason, aagga dhaqaalaha gaarka ah. Aad u khaas ah, meesha kaliya ee keli -talisnimada shuuciga ahi u oggolaanayso dhimbiilayaasha hanti -dhowrka qaarkood. Waa magaalo aad ugu dhow xuduudaha Ruushka iyo Shiinaha.
Masik waa meesha loogu talagalay barafka. Waa tan Masikryong Ski Resort, goob heerkeedu wanaagsan yahay xagga wiishashka, qalabka iyo hoyga. Iyo baararka karaoke iyo maqaayado badan. Waxaad fuuli kartaa 1200 mitir waxaadna ku raaxeysan kartaa 100 kiiloomitir oo dhaadhac ah.
Chongjin waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Waqooyiga Kuuriya waana wadnaha warshadeed. Waa mid fog oo soo dhoweeyeyaal yar Laakiin malaha taasi waa sababta aad si fiican ugu jeceshahay. Waxay leedahay barxad dhexe oo ah meesha ugu soo jiidashada badan, oo ay ku yaalliin taallooyinkii hoggaamiyeyaasha, sida iska cad. Waana halkaan. Run ahaantii wax kale ma jiraan. Inta u dhaxaysa xaqiiqda ah inay tahay waddan aad u yar oo leh hal milyan oo xayiraad ah ...
Hagaag, ugu dambayntii waxaan magacaabi karnaa hawl wadeennada dalxiiska: Korjoogayaasha Koryo (xoogaa qaali ah, waxay u egtahay inay qaabisho socotada waayeelka ah oo aan ahayn dhallinyaro aad u badan), Uri Tours (waxay ahaayeen kuwii abaabulay safarka Dennis Rodan), Socdaalka Lupine iyo Adeegyada Safarka Juche (labadaba Ingiriis), Socdaalka waddada dhagaxa ah (oo ku salaysan Beijing), FarRail Tours iyo KTG. Kuwani waxay ku jiraan shabakadda had iyo jeer, laakiin mid aad loo jecel yahay ayaa sidoo kale ah Socdaalka Hormoodka Da'da yar.
Wakaaladan ugu dambaysa ayaa bixisa safarada aasaasiga ah laga bilaabo 500 euro (hoy, tareen Beijing- Pyongyang - Beijing, cuntooyinka, wareejinta tilmaamaha, khidmadaha gelitaanka. Kuma jiraan kharashyada dheeraadka ah, cabitaannada iyo talooyinka, laakiin waxay mas'uul ka yihiin ka shaqaynta fiisaha iyo tigidhada. dhammaan wakaaladahaan waxay la shaqeeyaan dowladda Kuuriyada Waqooyi markaa waa asal ahaan safarro uu soo abaabulay.
Waqooyiga Kuuriya waligaa kaligaa ma noqon doontid. Waxaa laga yaabaa inaadan u safrin koox ahaan, haa, laakiin hal mar ciidda Kuuriyada Waqooyi marwalba way kaa ilaalin doonaan, laga bilaabo imaatinkaaga ilaa bixitaankaaga, laga bilaabo marka aad subaxdii kacdo ilaa habeenka. Mana ka bixi kartid hudheelka keligaa, kama leexan kartid hagaha ama kooxda, qaylin, orod, ama taaban taallada ama sawirrada hoggaamiyeyaasha sharafta leh, ama sawiro ka qaad iyaga oo madaxa ka jaraya ...
Ma jiraan raaxo weyn ama raaxo, noloshu waa mid aad u fudud, oo xuduud la leh qallafsan xaaladaha qaarkood. Ma jiraan wax xayeysiis ah waddooyinka dadweynaha, ma jiro Internet, xakameyntu waa joogto. Waxaa laga yaabaa inaadan helin warqadda musqusha ama saabuun, in haddii aad ka sii baxdo caasimadda aad aado meelo aan lahayn koronto ama biyo kulul. Waa sidaas, qof kasta oo sheega in dareenka qariibnimada iyo wax aan jirin ay aad u weyn yihiin.
Runtu waxay tahay in socdaalka noocaas ahi uu aad uga fog yahay inuu ahaado mid lagu raaxeysto ama safar fasax ah, laakiin hubaal waa wax aadan waligaa illoobi doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin » Sida loogu safro Kuuriyada Waqooyi
Dharka caadiga ah ee Gobolka Andean